u-Moeen Ali umisa ukulwa kama-Proteas
MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 06: Duanne Olivier of South Africa celebrates dismissing Ben Stokes of England during day three of the 4th Investec Test match between England and South Africa at Old Trafford on August 6, 2017 in Manchester, England. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)
Ama-Standard Bank Proteas akhombise isimilo ekuhlanganiseni ukulwa okunomfutho ngebhola ngaphambi kokuthi u-Moeen Ali ahlasele ukuba nesiqiniseko sokuthi i-England ihlala ingaphambili ngosuku lwesithathu lomdlalo we-Test wokugcina e-Old Trafford e-Manchester ngeSonto.
Ngesinye isikhathi ama-Proteas ebebeke i-England ku-134/6 okubeke i-England ngaphambili ngama-runs angu-270 kodwa u-Ali ubeke unyawo phansi futhi nangesikhathi imvula isheshe iqeda umdlalo ebesehlanganise ama-runs angu-67 (59 balls, 8 fours, 3 sixes) kumphumela we-England ongu-224/8 okunike iqembu lasekhaya ukubangaphambili ngama-runs angu-360.
Endleleni u-Moeen uhlekise ngobunzima abanye abashayayo abahlangane nakho uma kukhulunywa ngobunzima be-pitch njengoba ehlasele u-Keshav Maharaj.
Njengoba kusele izintsuku ezimbili eziphelele, nokho isimo sezulu singaba inkinga, i-England ngathi angeke ithathe i-declaration okwamanje ngoba ama-Proteas okumele agijimele ukunqoba umdlalo futhi alinganise i-series.
Omunye oshaye kahle kwi-England kube ukapteni wabo, u-Joe Root (49 off 106 balls, 6 fours).
u-Duanne Olivier uqhubekile nokunyukela phezulu ngokulingana nezibalo zakhe ezinhle u-3/38 futhi uzothola ithuba lokulungisa uma i-England iqhubeka i-innings yayo yesibili kusasa. Namhlanje ukhiphe abayingozi u-Root, u-Ben Stokes no-Jonny Bairstow.
u-Elgar ushaye ikhulu lesishagalombili ngaphambi kokuthi i-England inqobe ngama-runs angu-239 uElgar ujabulela ukuhola iNgilandi inqobe isimanga somdlalo namaProteas AmaProteas aveze ikhono kumaT20 uAmla noDe Kock bavele bazenzela uStokes uzenzele osukwini lokuqala